उत्यकामा १८१ आइसियु र ७६ भेन्टिलेटर - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सरकारले कोरोना भाइरसका गम्भीर सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि काठमाडौंमा उपत्यकामा १ सय ८१ आइसियु र ७६ भेन्टिलेटर भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका आज नियमति पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ती मध्ये ८२ आइसियु श्यया र २७ वटा भेन्टिलेटरमा गम्भीर सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अझै ९९ आइसियु र ४९ वटा भेन्टिलेर खाली नै रहेका छन् । अहिलेसम्म २ सय ३५ आइसियु र ४२ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन । ती मध्ये वाग्मती प्रदेशमा १ सय २८ जना आइसियु र ३० जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । मुलुकभर २ हजार ६ सय आइसियु र ९ सय भेन्टिलेटर रहेका छन ।
आज काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ५४० जना कोरोनाका सङ्क्रमित भेटिएका छन । उपत्यकामा अहिलेसम्म ३६ हजार ३११ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । प्रवक्ता डा. गौतमले कोभिड १९ अस्पताललाई कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि पूर्ण तयारी साथ राखेको जानकारी दिए ।
आकस्मिक सहित सबै सेवा पनि २४ घण्टा खुला गरिएको उनले बताए । उनले सामान्य लक्षण र लक्षण विहीन सङ्क्रमितहरु मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी घरकै आइसोलेसनमा बस्न समेत अनुरोध गरे।
मन्त्रालयले घरमा बस्न सम्भव नभएमा टोल फ्रि नं. ११३३ नम्बरमा सम्र्पक गर्न र स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भएका अस्पताल जान आग्रह गरेको छ । थप जानकारी चाहिएमा ९८५१२५५८३७ र ९८५१२५५८३९ मा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ ।
ट्याग्स: १८१ आइसियु, ७६ भेन्टिलेटर, उत्यकामा